Ego Nchoputa Ozi na Akaụntụ Forex: Atụmatụ Ego Ego - FOREXFUNDS.COM
Ị nọ ebe a: Home / Ego Akaụntụ / Ego Ozi Ego na Ejikwa Akaụntụ Forex: Atụmatụ Ego Ego
Ego Ozi Ego na Ejikwa Akaụntụ Forex: Atụmatụ Ego Ego
August 6, 2018 by nchịkọta akụkọ Ahapụ a Comment
Ego enyere ndị mmadụ aka na-enye ndị ahịa azụmaahịa Forex aka ị nweta ego nke akụkọ ha na-eche ihu na ego. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ahịa mepee akaụntụ $ 1-nde ma tinye ego ya na $ 250-puku nke ezigbo ego, ego ederede na akaụntụ ahụ bụ $ 750-puku. Onye ahia nke na-ejikwa akaụntụ ahụ nwere ike ime ka akụkọ ahụ nweta uru 3-ugboro, ma ọ bụ $ 3-nde. Ọ bụrụhaala na $ 250-puku ahụ na-ekpuchi oke mkpa nke onye na-ere ahịa ebe akaụntụ ahụ bi, ego na akaụntụ ahụ
Ego Akaụntụ Ego
ga-ekpuchi ego ego ahụ. Ọ bụrụ na ego dị na akaụntụ ahụ ga-ebelata, maka ebumnuche ọ bụla, gụnyere nfu ahia ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ nke njikwa na ụgwọ mkpali, a ga-achọ ka onye ahịa ahụ ziga ego ọzọ na onye na-ere ahịa iji kwado ọnọdụ ndị ahịa Forex na akaụntụ ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na onye na-ere ahịa ga-agbanwe oke chọrọ ya, n'ihi isi obodo ma ọ bụ mgbanwe nchịkwa, onye nwe akaụntụ Forex jisiri ike ziga karịa ego iji kwado otu ọnọdụ ahụ.
Otu uru dị mkpa nke enweghị ego bụ mbibi nke ihe egwu ego. Ọ bụrụ na onye na-ere ahia ahụ, ebe akaụntụ Forex jikwaa bi, nwere usoro mkpesa na oke oke chọrọ, mgbe ahụ ego ga-enye onye ahịa ohere iziga obere akụkụ nke uru nke akaụntụ ahụ. Site na iziga obere ego, onye ahịa anaghị ewere ihe ize ndụ kredit dị na onye na-ere ahịa dịka ọ ga - abụ ma ọ bụrụ na ọ zigara ọnụ ahịa ihu nke akaụntụ ahụ na onye na - ere ahịa na ego. Ego ga-anọ na ụlọ akụ ya nke ọ nwere ike itinye ya n'ọrụ na ntinye ego ọzọ. Ọ dị mkpa icheta na, mgbe ejiri ego eji eme ihe na akaụntụ Forex jisiri ike, a na-ebo ụgwọ ịgba ume na akaụntụ ahụ na ọnụahịa yana ego dị na akaụntụ ahụ ga-agbanwe n'otu uru dollar dị ka uru ihu.
Ego ederede na ejikwa Akaụntụ Forex jikọtara ọnụ.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Ego Akaụntụ, Akaụntụ Akaụntụ Forex Tagged With: akaụntụ ihu uru, leverage, echiche ego, akuko